Maitiro ekuti utore mukana wekuisa wega kuvandudza zano rako pamabiko uye makongiresi | ECommerce nhau
ECommerce nhau | | Zviitiko
Denda iri rakonzeresa kudzima mukanzuru yekutengeserana nekongiresi. Sezvo isu tichizodzokera kune zvakajairika zvishoma nezvishoma, zvakafanira kuti makambani agadzirire zano ravachaita rekuzvisimudzira ivo mumhando iyi yechiitiko mune ramangwana. Panguva ino, chinhu chakanakisa kuita vanopa tsvaga uye sarudza zviitiko zvichazoratidzwa.
Kukuvadza kwakakonzerwa naCovid-19 muchikamu ichi kunosvikawo kune vamwe vazhinji, nekuti makambani mazhinji anomirira kuendesa nhau dzawo kumitambo inonyanya kukosha. Semuenzaniso, chikamu chefoni mbozha chakatambura nemhedzisiro. MunaFebruary, Barcelona yakanga ichizotambira rimwe gore rimwe chiitiko chikuru kwazvo chefoni pasi rose, iyo Mobile World Congress. Mazhinji emakambani makuru enharembozha anga achienda kunopa zvigadzirwa zvavo zvitsva pakongiresi iyi, iyo yakamisikidzwa kuenda kuna 2021.
Kubviswa kwemabiko hakungove nemhedzisiro yakakura kumakambani anga achizopa zvigadzirwa zvawo, asiwo kune avo vaifanira kuziva hunyanzvi hutsva pamusika kuti varambe vachifambira mberi mukutsvaga kwavo.
Uye zvakare, pazviitiko izvi pane kusangana-ne-kumeso kusangana pakati pezvikwata nevatengi. Pakakanzurwa makongiresi, makambani akarasa mukana uyu wekudyidzana nevashanyi uye kuhwina vatengi vatsva.
Maitiro ekugadzirira zano rakanaka pamabiko uye makongiresi
Sezvo mabiko nemakongiresi akamiswa kana kumisikidzwa kwenguva, chinhu chete chekuita kugadzirira ramangwana. Pano tinotora zvimwe zviito zvaunogona kuita kubva zvino zvichienda mberi kunzvenga kuwira mune zvakajairika zvikanganiso.
Sarudza zviitiko zvauri kuzopa: kumwe kwekukanganisa kukuru kunoitwa nevaratidziri kusasarudza munguva kuti zviitwa zvipi zvavanomira panzvimbo yavo. Munguva yekuisa wega, iwe unogona kutora nguva kuronga zviitiko zvichaitika pakuratidzira kwako. Izvo zvakakosha kuti ivo vabatanidzwe kune yako brand uye masevhisi iwe aunopa.
Tsvaga anomira vatengesi: zvimire chikamu chakakosha chezano kana iwe uchida kumira pane yakanaka. Funga kuti iwe uchave wakakomberedzwa nemakambani ayo anopa zvakafanana masevhisi sewe. Iwe unofanirwa kukwezva kutariswa kwevashanyi uye yakanakisa nzira yekuita izvi ine yakasarudzika kumira. Munguva yekuisa wega, unogona kubata vanopa uye uwane iyo inonyatsoenderana nezvido zvako.
Sarudza kuti chako chinenge chakamira sei. Kana iwe watoona kare zviitiko zvipi zvauchazopa uye wakataurirana nevatengesi, inguva yekufunga nezve fomati yechako chako. Izvo zvakakosha kuti ivo varipo vaone zviri kuitika mukati meiyo tafura, saka iwe unofanirwa kuchinjisa nzvimbo yacho kune zvinoitika zvichaitika imomo.
Pakupera kwezuva, isu hatigone kudzora mamwe mamiriro ezvinhu atisingakwanise kusvika, asi tinogona kuve nechokwadi chekuti kudzoka pane zvakajairika kunoitika nesimba rakakura uye nesangano rinogoneka kudzosera kukanganisa kwakakonzerwa necovid-19 kusvika pazvinogoneka. .
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zviitiko » Maitiro ekuti utore mukana wekuisa wega kuvandudza zano rako pamabiko uye makongiresi
Nzira yekuwedzera sei kutengesa neiyo nzira yekutengesa?